Dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka garoonka Balli-doogle – STAR FM SOMALIA
Dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhacay duleedka garoonka Balli-doogle
Dagaal xoogan oo hubka noocyadiisa kala gedisan leesku adeegsaday, ayaa wuxuu gelinkii dambe ee maanta uu ka dhacay Deegaanka Waanbate, oo dhaca duleedka Garoonka Balli-doogle Ee Degmada Wanlaweyn Ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Dagaalkan, ayaa ka dambeeyay markii Xoogaga Ururka Al Shabaab ay wadada u galeen kolonyo, ay la socdeen Ciidanka Dowladda Somaliya, oo ka yimid dhinaca Garoonka Balli-doogle, waxaana halkaasi ku dhex maray dagaal soconaayay muddo hal saac ku dhow.
Ciidanka Dowladda oo watay afar gaari oo laba ka mid ah ay yihiin kuwo tawga loo yaqaano, isla-markaana aanay rasaastu karin, ayaa ka galay dhiiqo, waxaana la soo sheegayaa inay ku adkaatay in ay kala soo baxaan.
Ciidanka Dowladda oo aan wadan wax gaadiid ah, ayaa waxay dib ugu laabteen Garoonka Balli-doogle, xilli abaarihii Maqribkii ay ka soo baxeen ciidan fara badan, oo gurmad ahaan ugu soo dhaqaaqay Deegaanka Waanbate.
Ciidanka gurmadka, ayaa waxay baadigoob ugu jiraan gaadiidkii ay ka soo taggeen Ciidanka Dowladda, iyadoo laga cabsi qabo inay dhiiqada kala baxeen dagaal-yahanada Al Shabaab.
Ururka Al Shabaab, ayaa ku faanay in dagaalka ay ku dileen toboneeyo ka mid ah Ciidanka Dowladda, sidoo kalana ay ku qabsadeen saanad militari iyo afar ka mid ah gaadiidka dagaalka.
Haddii gaadiidkan ay si buuxdo ugu gacangalaan Shabaabka, ayaa waxay noqonaysaa khasaarihii ugu buurnaa oo soo gaaray Ciidanka Dowladda, ee Mareykanku uu ku tababaro Balli-doogle.
Al Qaacidada Somaliya, ayaa billihii ugu dambeeyay u muuqatay mid ku soo xoogeysaneysay Gobolka Shabellaha Hoose, wixii ka dambeeyay weerarkii ay 26-kii bishii June ku galeen Xerada Ciidamada Amisom ku lee yihiin Deegaanka Leego.
Jawaari oo furay shirka dhismaha guddiga madaxa banaan ee xuquuqda aadanaha
Madaxda ugu sareysa dawlada soomaaliya ayaa ka qeyb kashay janaasadii Jen. C/kariin Yuusuf Aadan Dhega-badan